Hair Hair: Famaritana ny fantsom-bokatra, ahoana no fomba hanamboarana ny volom-borona malemy 2020
Ahoana ny fomba hanodihana ny volo kirina ho volo volo
1 Ataovy haingana ny volony
1.1 Fomba hafa:
2 Ahoana no hamaritana ny curls?
2.1 Kitiho ny 4, aforeto ny fehiloha eo amin'ny toerana: Ataovy amin'ny volon'osy ny volon'osy:
2.2 Andramo 5 mamelatra ny volonao:
Ataovy haingana ny volony
Te-hiorina tanteraka amin'ny tontolon'ny volon'ny volo isika rehetra. Na izany aza dia mety ho sarotra sy mahakivy tanteraka ny faniriana ny fôsily voajanahary, ary ny zavatra rehetra azonao atao dia ny fikajiana ahodin-daha-tavoahangy miaraka aminao. Manana karazana 4a 4b aho, ary tiako ny voloko mikarakara rehefa miala sasatra izy aorian'ny fanasana sy ny lalina lalina, fa raha vao maina ny voloko dia miova tanteraka izany. Nialona ireo izay manana tavy voajanahary aho mandra-pianarako ny fomba hikarakarana sy hanamafisana ny voloko. Ny zavatra tokony hampodiana anao Ny endriky ny natiora dia lasa volo lava mainty dia mety amin'ny fifehezana ary avy eo dia mihidy ireo fingodododoana eo amin'ny toerany rehefa vita. Ity lahatsoratra ity indrindra indrindra ho an'ny anabaviko izay manana karazana 4 toy ny 4a 4b sy 4c ary maniry ny volony hijery moramora sy voafaritra kokoa.
STEP 1: Fantaro ny fototarao ary manantena zavatra mety hitranga amin'ny volonao. Raha manana volon'ny 4c voajanahary ianao dia tsy afaka manantena ny hamadika ny volonao amin'ny tontolon'ny 3b. Izany dia zavatra tsy ampoizina. Ny volo madinika indrindra azonao jerena dia ny fomba fijery rehefa feno maina sy feno rano izy. Amin'ny ankapobeny, ny volontsika dia afaka mijery ny 1-2 ny haavony rehefa marefo. Ny tetika dia ny fanesorana ireo fehiloha rehefa ao anatin'io fanjakana io ny volonao ary manidy azy ireo eo amin'ny toerany.
STEP 2: Fantaro ny haavon'ny porosity: To Manolotena ny volom-behivavy amin'ny volo manala baraka, tsy maintsy takatrao ny fomba hanomezana vatana tsara ny volonao. izany
Ilaina ny mahafantatra ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny haingon-tserasera ary inona ny vokatra dia hiasa tsara ho anao. Inona ny vokatra ho maina ny volonao. Raha manana porosity ambany ianao dia midika izany fa sarotra ny manala ny volonao; Na izany aza, rehefa maina ianao, dia maharitra ela kokoa. Ny haingon 'ny haingon' ny haingon-tsiramamy dia mihodina haingana ary mamindra haingana ny fahamendrehana; Na izany aza, dia very io fahamendrehana io. Ny porosity dia manondro ny isan'ny pores ao amin'ny volo volo. Manana lahatsoratra hafa aho izay mandalina lalina porosity Eto.
Raha toa ka tsy mahomby ny rehetra, dia azonao ampiasaina kinky mikotrika fitongilanana toy ny horonan-tadin-kofehy mihodina eto,
3c clip-ins, ary solovolo izay mbola manome anao ny fijery ara-boajanahary tsy miseho toy ny hoe manao fitohanana. Ny natolotro ho an'ny Hair Extensions kisary mahasalama ho an'ny sista voajanahary rehetra! Na izany aza, manana volo malefaka, volo kirgiana volo, afro kinky, afro manala, 4a 4b na 4c, mankany amin'ny volo kinkiest, dia nahazo anao mandrakotra.
Ahoana no hamaritana ny curls?
Dingana 3 mahandro: Ny rano no fitaovana tsara indrindra hakana ny volo eo amin'ny toetrany kinky. Ny rano dia mpametavoka tsara ary hamolavola ny fehiloha. Ny zava-drehetra momba ny rano dia maina haingana be, ary miverimberina ny kirantsika! Rehefa feno rano ny volom-borona, ary avy amin'ny toetry ny kinky izany, izao no fotoana tsara indrindra hanampiana ny menaka sy ny menaka manitra izay miasa tsara indrindra amin'ny rivotra. Glycerine dia solika mifototra amin'ny rano izay miditra ao amin'io volo io. Tsy manalefaka haingana toy ny rano izy ary mamela haingon-tarehy tsara eo amin'ny volo. Manoro hevitra tsara aho hampihatra ity vokatra ity aorian'ny fanesoranao ny fanadiovana anao. Avy eo dia ampiasao ny menaka fanosotra sy ny mpitsentsitra fotsifotsy hafa.
curls voafaritra voajanahary volo
Kitiho ny 4, aforeto ny fehiloha eo amin'ny toerana: Ataovy amin'ny volon'osy ny volon'osy:
Amin'izao fotoana izao, ny volonao dia mbola mafana sy somary mihosotra. Ankehitriny ny fotoana hanakatonana ireo fehiloha ireo eo amin'ny toerany. Ny fingodonam-bidy mba hahatonga ny volonao kinky hijery manala baraka dia ny hampiato ny fihenan'ny rano sy ny tsy fahampian-drano. Ankehitriny ny volonao dia eo amin'ny toerany mikorontana, te-hampihatra volo safidy ianao. Ny gel iray tena tiany dia eco styler. Ataovy azo antoka fa ny vokatra napetrakao ao amin'ny volonao aloha dia hifangaro tsara amin'ny gel ary tsy hamela tavan'antoka milky na fotsy. Alaivo ny jôl ary ampiheteo amin'ny volonao, fa tsy manelingelina ireo karatra noforoninao. Ampiasao amim-pahamendrehana rano misononoka miaraka amin'ny t-shirt taloha. Ho an'ny vokatra tsara indrindra, mipetraha eo ambanin'ny trozona kapoaka mba hahafahan'ny gil maina haingana ary hisoroka ny firoboroboana betsaka araka izay tratra!
Andramo 5 mamelatra ny volonao:
Ankehitriny fa maina ny volonao, tokony hibanjina sy hikoropaka izy. Ho an'ny volo kely sy volavolana kely, manoro hevitra aho amin'ny fantsom-birik'ilay kapety ary mamelatra ny volo eo amin'ny fakany mba hanapahana ny henjan'ny gel ary hamela ny rivotrao hanana vatana tsy misy fanelingelenana ny fehilahinao noforoninao. Rehefa manodina ny volonao kirina amin'ny volo malefaka ianao amin'ny fampiasana io fomba fanasan-damba sy fisakanana io, ny volonao dia henjana avy amin'ny gel; Na izany aza dia hamotsotra ny andro 2 izy io. Azonao atao koa ny manamboatra jiro moka ho an'ny vokatra organika.
Sary nahazoan-dalana: @beatbynesh
dingana 6 fanodikodinam-bolo: Raha tsy tianao na te hampiasa ny gel ao aminao ianao, dia afaka manamboatra hatrany ny sakaiza, ny saka hoditra, na ny fomba hafa izay manipika ny tontolon'ny volon'ny volo.
Pros sy Cons des Mini Tail
Fitsarana tsy ara-drariny: Cyntoia Brown